I-Villa 4 ~ ikhaya eduze nogu - I-Airbnb
I-Villa 4 ~ ikhaya eduze nogu
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ros And Suze
U-Ros And Suze Ungumbungazi ovelele
Shona ogwini lokuhlala olwandle ku-villa yethu egcwele ukukhanya, uziqhayise ngokubukeka okuguquguqukayo ngaphesheya kweTrent Water kuya ezindundumeni zesihlabathi nolwandle olubanzi ngale kwalo. Amamitha angu-150 kuphela ukusuka ogwini futhi abekwe endaweni ethulile, enamaqabunga, ujabulele indawo yokuhlala evulekile, ikhishi eligcwele kanye nelondolo, i-balcony enkulu, indawo yokuhlala yangaphandle, igceke elivikelekile kanye nokupaka okulula. Imizila yokuhamba ngezinyawo neyamabhayisikili emangalisayo, izindawo zokulondoloza imvelo, amabhishi anesihlabathi esimhlophe, amathilomu nezinto eziwusizo uhamba ngezinyawo nje olufishane noma uhamba ngezinyawo.
I-Villa 4 isanda kulungiswa, ihlanzekile, ifudumele futhi yamukela. Kanye ngaphesheya kolwandle ngamanzi amnene acocekile, futhi amamitha angu-700 ukusuka enkabeni yedolobha, futhi itholakala ngokuphelele ohlangothini lwedolobha lokuhamba ngaphandle nangemoto. Kodwa ngokuzwakalayo, ungase ungafuni ukushiya usofa wethu omkhulu ontofontofo! Ihlotshiswe ngempompi yokushisa noma ama-sunbeams, ngena ekhoneni lokufunda elithokomele ngencwadi enhle, noma wabelane ngokudla etafuleni lokudlela elibheke indawo enhle kakhulu. Hlanganani ndawonye endaweni yokosa inyama egcekeni elingemuva, noma niphuze iwayini emphemeni ongaphambili.
* I-villa yethu ilala izivakashi ezifika kwezingu-5.
* Ikamelo lokulala ngalinye linombhede omkhulu (ukulala izivakashi ezingaba ngu-4).
* Uma ulala umuntu wesi-5, kuzodingeka wenze usofa uphakame ngesikhathi sokulala (kunikezwa ilineni).
* Ngezizathu zenhlanzeko, wonke umuntu kufanele asebenzise amashidi aphezulu naphansi embhedeni wakhe.
* Uzonikezwa amasethi amabili okhiye. Ikhodi yebhokisi lesikhiye izonikezwa kuwe ngaphambi kokufika.
ISIKHATHI sokuphuma * ISIKHATHI SOKUPHUMA
ngu-10am – ngaphandle uma kwenziwe amanye amalungiselelo.
* Sicela ushiye indlu ihlanzekile futhi icocekile, njengoba uyitholile.
* Uyakwazi ukupaka egcekeni lemoto futhi ube nenye imoto emgwaqeni ongenayo.
* Qaphela ukungena nokuphuma njengoba kungcono kakhulu
* Asitusi izimoto ezinkulu egcekeni lemoto.
* Bheka imikhawulo yejubane ezindaweni ze-resort.
* Sinikeza i-wi-fi yamahhala kanye ne-Chrome cast ukuze ukwazi ukubuka noma yimaphi amasevisi akho okubhalisa. Kukhona neziteshi ze-TV ezingu-25+ ze-Freeview.
* Izincwadi ezincane zihlezi eceleni kwendawo yethu yokufunda eselangeni. Siyakwamukela ukuthi unikezane nencwadi futhi.
* Akukho ukubhema ngaphakathi endlini.
* Uma ufisa ukubhema, kukhona i-ashtray ngaphandle. I-villa yethu ingamapulangwe futhi iyinkimbinkimbi inamaqabunga ngakho ubungozi bomlilo bukhulu - sicela ungafaki izinqamu zakho!
* Uma ushiya izinqamu ukuze sizihlanze, kuzokhokhwa imali yokuhlanza eyengeziwe engu- $ 30.
* Uma ubhema ngaphakathi, imali eyengeziwe ehambisana nokuhlanza okwengeziwe okudingekayo/i-drycleaning kanye/noma ukulahlekelwa kokubhukha kuzokhokhwa (okungenani $ 150).
AMAPHATHI NOMSINDO * Akufanele kube NAMAPHATHI
* Njengoba sihlala endaweni yokuhlala, sicela ungabi nomculo omkhulu noma umsindo ngemva kuka-9pm ngeviki ebusuku, ngo-10pm ngoLwesihlanu/ngoMgqibelo ebusuku, hhayi ngaphambi kuka-8am.
Uma uhlose ukuletha umngane wakho onoboya, kuzodingeka ucele imvume yethu ngaphambi kokubhukha. Uma sisamukele isicelo sakho sokuthi inja yakho ibe sendlini:
* Sinegceke elincane elibiyelwe nepeni, nokho, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwenja yakho. Kufanele uthathe isibopho esigcwele sokugcina inja yakho iphephile.
* Kufanele ugcine umngane wakho onoboya ngaphansi kwamandla akho ngaso sonke isikhathi.
* Uma inja yakho ihlanzekile futhi iqeqeshwe ethoyilethi ivunyelwe ngaphakathi, kodwa akufanele ibe khona kunoma iyiphi ifenisha noma imibhede.
* Sicela ulethe umbhede wakho wenja ukuze balale ngaphandle (noma endaweni yokuwasha).
* Sicela, ungatshoni!
* Sicela uqinisekise ukuthi ushiya indlu ingenazo izinwele zezinja futhi uhlanze ingadi ngemva kwenja yakho.
* Uma kukhona noma yibuphi ubufakazi benja ebesendlini - okuhlanganisa izinwele, i-poo, ukungcola, iphunga, umonakalo noma izinambuzane (isib. izinambuzane) - kuzodingeka sikukhokhise imali eyengeziwe yokuhlanza, i-drycleaning kanye/noma imali yokulungisa ehambisana nokuhlanza okwengeziwe okudingekayo (okungenani $ 50).
* Siyakuthanda ukwabelana ngendawo yethu nabangane abanoboya ngakho sithemba ukuthi uyaqonda, unakekele indlu yethu, futhi uhlale kahle.
* Uzonikezwa ithawula elilodwa lokugeza isivakashi ngasinye (sicela ithawula lasebhishi le-BYO). Sinolwazi lwamanzi ngakho sicela ukuthi uphinde usebenzise amathawula ngesikhathi sokuhlala kwakho.
* Sicela usebenzise kuphela amathawula abelwe, ilineni nemibhede. Ukusetshenziswa kwezinto ezingasetshenzisiwe kuzokhokhiswa imali eyengeziwe yokuhlanza engu- $ 10 entweni ngayinye.
* Izinto zasekhishini eziyisisekelo (itiye, ikhofi, ushukela, ubisi, nezinye izinto zokugeza) nezinto zokugeza (i-shampoo, i-conditioner, umuthi wokuxubha amazinyo, kanye nokugeza izandla nomzimba) ziyatholakala.
* Kunabantu ababili abathengisa ukudla kwasendaweni abavele bahambe emgwaqweni nganoma yini ongayidinga.
Sithemba ukuthi uzohlala kamnandi!
* * Sicela uqale umlayezo wakho nge- "HEY ROS & Suze" ukuze sazi ukuthi ukufundile lokhu! * *
Siyajabula ukukuthumela nge-imeyili yonke le mininingwane nokuningi mayelana ne-Villa yethu nesifunda - vele ubuze.
4.86 · 110 okushiwo abanye
Ehlotshiswe ekupheleni okuthulile kwe-Bridport eduze ne-Brid River, ibhishi lingamamamitha angu-150 kuphela ukusuka emnyango wethu futhi kumane nje kuyizinyawo ezimfushane ukuya enkabeni yedolobha.
I-Villa 4 ibheke i-estuary ecocekile 'i-Trent Water', ikhaya lezinyoni zasogwini lendabuko nokuphila kwasemanzini, futhi inikeza amanzi amnene okutshuza, ukuhamba ngesikebhe, ukudoba nokubhukuda. Kukhona ne-ramp yesikebhe kanye nebhishi yokuzivocavoca yenja kule ndawo.
I-Bridport ngokwayo iyidolobha elihle elisogwini elibhekene namanzi aluhlaza okwesibhakabhaka amahle ase-Greece Bay. Inomlando omude, idolobha liqhuma ngesikhathi esifushane, kodwa lilungele ukuvakashelwa unyaka wonke. Izimbali zasendle ezimangalisayo, izindawo zokudlala igalofu ezingasetshenziswa kanye namabhishi acashile ngezinye zezindawo ezimbalwa ezithandwayo. Uzothola nekhofi elihle, amathilomu anemibala kanye nezindawo zokudlela ezijabulisayo ezibheke amanzi.
Ukunikeza ubumnandi obuningi basolwandle, kunama-nooks nama-cannies kulo lonke ugu olufihla amabhishi anesihlabathi esimhlophe, alungele ukubalekela ijubane elisheshayo lokuphila kwesimanjemanje. Kukhona namapaki amaningi asogwini we-barbeque yomndeni ngemva kosuku ogwini.
I-Bridport izungezwe izindawo zokulondoloza. I-Bridport Wildflower Reserve igqugquzela ukuphila njalo entwasahlobo ngemibala ehlaba umxhwele edonsa izinyoni nabathandi bezinyoni abavela kuso sonke isifunda. Uzothola imibala emihle ngaphakathi kwe-Point Conservation Area, nokho, zonke izindawo ezizungeze idolobha ziqukethe amagugu emvelo ahlanganisa izimpophoma, izindunduma zesihlabathi eziphakeme, izilwane zasendle eziyingqayizivele nokubukeka okukhuthazayo kwasogwini.
Empumalanga ye-Bridport, uzothola ezinye zezindawo zokudlala igalofu ezihamba phambili emhlabeni. Ngomuzwa ofanayo nezidlo zegalofu ezimazombezombe, i-windswept yase-Scotland, abenzi be-Barnbougle Dunes kanye nesifundo sikadadewabo i-Living Farm bakha izifundo khona kanye ezindundumeni zesihlabathi eziphakeme ze-Bridport.
Kubantu abathanda ukudoba, ungakwazi ukuqasha isikebhe sokudoba ezemidlalo e-Bass Strait noma uqashe isikebhe esincane sase-Bass Bay. Ungase futhi wehlise umugqa wakho ematsheni.
Ayikho indlela engcono yokuxhumana nomuntu omthandayo kunasendaweni yezithandani efana ne-Bridport. Izindawo zangaphandle zigcwele izenzakalo ezijabulisayo nokuba wedwa, kuyilapho izindawo zokwenza iwayini eziseduze zenezela endaweni ejabulisayo. Imindeni iyathanda ukuvakashela i-Bridport ngenxa yendlela yayo yokuphila ye-resort, amabhishi kanye nezindawo zokudlela ezihlukahlukene.
I-Bridport inokuthile kwawo wonke umuntu!
OKWENZIWAYO NEZINTO ongazibona:
* Amapaki amabili ahamba phambili asezintabeni zase-Tasmania (i-Blue Derby ne-Hollybank Wilderness Adventures), aheha abagibeli abavela emhlabeni jikelele. Setha kwamanye amahlathi amahle kakhulu emhlabeni, ngalinye lingaphansi kwemizuzu engu-45 uma ushayela.
* Pipers Brooke Vineyard, eyasungulwa ngo-1974, ikhiqiza izithelo zewayini elidumile emhlabeni wonke le-Kreglinger neSiqhingini Sesishiyagalolunye. Thatha uhambo lokubuka indawo eyenza iwayini futhi ube nesihlalo e-Winery Café ukuze ubone kahle isivini. Vula nsuku zonke, iyindawo ekahle kakhulu yengilazi yewayini noma ikhofi.
* I-Bridestowe Lavender Estate iza ukuphila ngo-December ngezimbali zasendle eziqhakaza kuze kube u-January. Le ndawo engu-265-acre manicured lavender iqukethe izingadi ezinhle eziheha izivakashi unyaka wonke.
* Ingadi enhle eyimfihlo ye-Cleone yimizuzu engu-5 nje yokushayela imoto. Uzothola izitshalo ezinhle zangaphakathi nangaphandle kanye nezitshalo zezipho, futhi izingane zizokujabulela okokuzithokozisa okuthola imihlobiso efihlekile engadini. Ebusika, ungahlala eduze komgodi womlilo ongaphandle.
* Ama-Barnbougle Golf Course adumile emhlabeni wonke asebenzisa ngokunenzuzo ugu olusenyakatho-mpumalanga ye-Tasmania ukuze wenze izifundo eziyinselele. Uzodlala phezu kwamabhishi aphenduka abe amagquma aqhakazile, futhi uzoshaya izithombe ezindundumeni. Kuyafaneleka ukuvakashelwa ngisho noma ungadlali igalofu ukuze ujabulele ukungenisa izihambi okuhle kakhulu, ukudla newayini lendawo.
* Indawo ngokuqinisekile ayifushane kumagalofu. Eduze nasekhaya, i-Bridport golf course iyindawo engu-9-hole esekelwa amatiye angu-18. Le nkambo inemigwaqo emihle yesihlahla kanye nama-greens alungiswe kahle. Kukhona nezifundo nase-Scottsdale eseduzane nase-Tam KaenShanter.
* Uma ungathanda ukuzijabulisa, zama i-Barnbougle Spa. Le ndawo engcwele inamakamelo okwelashwa abantu abashadile, igumbi lokubonisana ngenhlalakahle, igumbi lesitimu kanye ne-spa yosawoti. Indawo ethulile yokuphumula nokujabulela ukubuka okumangalisayo kogu lwase-Tasmania.
* I-Bridport Walk Track iwukuhamba kwesekisi okuxhumanisa i-foreshore, amabhishi, i-Wildflower Reserve, utshani, amahlathi asendulo kanye ne-Brid River. Umzila wokuhamba usemhlabeni ongaphezu kweminyaka engu-35,000 womlando we-Aboriginal wawuyingxenye enkulu yokuphila kwe-Coastal Nations. Ukuhambahamba kuseduze nedolobhana lase-Bridport futhi kungahamba kalula ngabantu abasebancane nabadala, okunezindawo ezihlukahlukene zokungena nokuphuma. Ungajoyina ukuhamba ngqo emgwaqweni ukusuka endaweni yakho yokuhlala!
* Indawo Yokubhukuda yase-Mermaid iyindawo yokubhukuda enhle imvelo ezungezwe idwala lasogwini. Uma ukutshuza kukhona kudala indawo yokubhukuda enhle kakhulu, indawo yokudlala ekahle kakhulu yabo bonke ubudala. Indawo Yokubhukuda uhamba ngezinyawo olufushane ukusuka enkabeni yedolobha futhi amamitha angu-500 ukusuka e-Old Pier Beach ethandwayo.
* Ngaphezu kwalokho eceleni kwe-Mermaid 's Beach bese u-Adam' s Beach, indawo ende lapho abangane bakho abanoboya bengagijima khona.
* Ukuze uthole uhambo oluhlukile ungathola i-Kookaburra Ridge Quad Bike Tours, ukunambitheka kwehlathi lase-Tassie. Uhambo luhamba ngemizila eminingi, imihlobiso efihlekile kanye nasemadlelweni avulekile. Ayikho ilayisensi yokushayela edingekayo. Uzoyithola nje imizuzu engu-10 ngaphandle kwedolobha.
* Ukuze uthole okokuzithokozisa okuyingqayizivele ngempela zama i-Flinders Islandwagen. Banezinhlobonhlobo zezindiza, kuhlanganise namasevisi okuqasha, amasevisi e-Bass Strait Islands nasezindaweni ezizungezile.
YINI OKUFANELE UYIDLE: E-Bridport, uzothola konke kusuka emathilomu endawo kuya ezindaweni zokudlela ezihamba phambili kanye NOKUDLA
okubili kwasendaweni. Umqondisi Wohambo No. 1 okungcono kakhulu e-Bridport - I-Bridport Bunker Club - ingamamitha angu-600 ukusuka endaweni yakho yokuhlala.
UKUTHENGA: Kusukela ezingutsheni ze-boutique nezipho, kuya ku-newsagency, i-hardware kanye ne-pharmacy, zonke izidingo zakho ZOKUTHENGA
zizohlangatshezwa nje ngezinyawo ezimfushane ukusuka ku-villa.
Ibungazwe ngu-Ros And Suze
Sawubona, amagama ethu ngu-Ros no-Suze. Singodadewabo base-Tasmania abathanda indlela yokuphila yasolwandle nomhlaba wemvelo. I-Bridport ibihlezi idonsa izinhliziyo zethu - ukunikeza okuhle kakhulu kulokhu - ngakho ekuqaleni kwalo nyaka, njengoba nje i-COVID yaphenduka ukuphila, sanquma ngesibindi ukulandela amaphupho ethu futhi sazithengela lesi siqephu esincane sepharadesi.
Sikumema ukuthi uze ujabulele i-villa yethu ethokozisayo egcwele ilanga nobumnandi ngenkathi singekho! Phakathi nokuhlala kwakho siyatholakala ngomsebenzi we-Airbnb, noma ngama-mobiles ethu.
Sawubona, amagama ethu ngu-Ros no-Suze. Singodadewabo base-Tasmania abathanda indlela yokuphila yasolwandle nomhlaba wemvelo. I-Bridport ibihlezi idonsa izinhliziyo zethu - ukunike…
URos And Suze Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 2020/81